Dadka qaba dareen ah wanderlust si deg deg ah dareemi miiro karo fikirka faqri naftooda on shaqo in xajiya meel gaar ah muddo aad u dheer. Waayo, dadkan, nololeed ee sal lahayn waa mid ka mid ah ugu wanaagsan.
Haddii aad tahay mid ka mid ah dadka kuwa jecel garaacid wadada si joogto ah, hurdada ee magaalooyinka cusub, dhadhankiisu cuntooyin cusub iyo barashada dhaqamada cusub, aad rabto in aad si xaqiiqo ah inay ku baaqaan in mustaqbalkiisa ciyaareed in uu kuu ogolaanayaa inaad ka ogaado adduunka ku saabsan shuruudaha adiga kuu gaar ah.
About 42% ganacsiga safra ballansan hotels iyagoo isticmaalaya casriga ah iyo waxa uu ogol yahay hotels.ng (adeeg jaale hotel online loogu talagalay dadka doonaya heerka qolka la awoodi karo in Nigeria) si loo ogaado qaybaha safarrada ganacsiga, kuwaas oo ugu dunida ku safri.
Halkan waxaa hogaanka 10 Shaqooyinka in aad damaanad mustaqbalkiisa ah uunana socod dunida:
1. qore Sports
Haddii aad dalka shaqo ururada isboortiga sida a qora isboortiga, Sharaxaad shaqo aad u baahan doontaa in aad u safarto dhacdooyinka ciyaaraha dalka ku baahsan oo raadineysa iyo qortaan tayo cusub.
Si dhab ah shaqadan ku raaxaysan, aad u baahan tahay in ay dareen ku saabsan ciyaaraha!
2. Hantidhawrka Financial
Ma sida lambarada? Sidee fikradda ah soo gasho lacag baadhaya diiwaanada maaliyadeed iyo info canshuurta ganacsi oo ku wareegsan dhawaaqa dunida? Good? Markaas waa in aad noqon hanti ah!
hantidhawrka adduunka ayaa la filayaa in ay koraan by 11% ka hor 2024, maxaa yeelay shaqo this aad u baahan tahay si ay u joogsato at meelo kala duwan oo dunida ah oo ku saabsan ganacsiga.
3. Maamulaha Dhismaha
pay waa wanaagsan yahay, iyo aad u hesho in ay inta badan u safri sababta oo ah shaqooyin badan on-site. Waxaad adigu heli kartaa faqri dhowr bilood meel gaar ah dhammayn mashruuca dhismaha ah. Xitaa haddii aad uma ay noqon kartaa maamulaha u gee, maxaa yeelay, shahaadooyinka aad, aad had iyo jeer ka heli kartaa in sida shaqaalaha taageerada.
4. Consultant Socdaalka
taliye A waa shirkad kasta ay go-to nin marka ay dhibaato. Iyada oo aqoon gaar ah aad, adeegyada loo baahan doonaa dhammaan daafaha dalka – iyo adduunka oo dhan. ILAALI xiriirka aad la leedahay macaamiisha diiran oo mutualistic u baahan doontaa in aad si joogto ah u samaynaya safar.
5. Shaqo on Ship Cruise a
Ka shaqeynta on markab safar uu u noqon mid ka mid ah shaqooyinka riyo ugu sareysa dadka jecel safraya. Ka fikir waxa ku saabsan: aad asal ahaan lacag u safraan dunida halka helitaanka cuntada iyo meel ay seexdaan on guriga. Waxaa si dhib leh xitaa arrimaha dabiiciga ah ee shaqadaada on markab safar ah.
6. Wedding sawire
Waad ogtahay oo dhan kuwa photos arooska caga on Bella Kaxeysto? sawir qaade waa in ay noqon in meesha ay qaataan tallaalada kuwa! Sidee qabow waa in? Iyadoo a camera tayo fiican leh oo il wanaagsan ee nalalka iyo midabbo, aad kasban kartaa nolol Tegay lamaanahan in ay qaataan photos runtii macaan.
7. Qorsheeyaha Event
Waxay jeelyihiin in sida wax sawir arooska, halkaas waa yabooh weyn haddii aad tahay qorsheeye dhacdo. Waxaad go'aansan kartaa in ay diiradda saaraan dhacdooyinka maxalliga ah (xisbiyada, aroosyada, dhalashada) laakiin juice dhabta ah ee safarka ku jira abaabulka xafladaha qaranka iyo kuwa caalamiga ah sida ciidaha, shirarka iyo bandhigyada ganacsiga.
8. Doorka Corporate of Kaaliyaha ah Executive
Haddii aadan xusuusan, waxaad qaadan kartaa on shaqo ee kaaliye xirfad heer sare-ee fulinta, taas oo macnaheedu yahay in aad loo xaq u safraya doonaa ag Tababaraha kooxda ee safar ganacsi! Waa farsamo weyn u dhisa aad resume aad!
9. Field Service Injineerro
Waxaad tahay tagaan-qof marka baahida macaamiisha caawiyo ku rakibidda ama dayactirka soo saarka. Haddii aad tahay injineer adeegga beer shirkad caalami ah, aad mari doona tababar ballaaran oo u safri ballaadhan meelo xiiso leh adduunka oo dhan.
10. Buyer Tafaariiqda / Iibiyaha
doorashada ganacsiga Great, haddaad jeceshihiin waxyaabaha moodada iyo leedahay wanderlust: ganacsiga tafaariiqda ah ee mustaqbalkiisa ciyaareed kaliya laga yaabaa in laydiin yeedhay. Iibso waxyaabaha dhif ah in mid ka mid ah dalka, iibiyo in kale!
Taasi ma aha oo dhan! shaqo kale waa inaad tixgelisaa haddii aad u jecel safarka ka mid ah isagoo ah midiidinka diyaarad, shaqaalaha gargaarka ee caalamiga ah, Wakiilka iibka, wakiilka socdaalka, iyo qoraaga safarka.
1 Comment on "10 Shaqooyinka Waayo Nigeria oo doonaya in ay ku Socda Round Adduunka"
kuwa waa shaqo aad u wanaagsan oo xiiso Nigeria. Sida Indonesia ah, Waxaan xiiseeyaa iyaga laakiin mararka Ma fududahay si aad u hesho shaqo kuwa. Well, Waxaan la sugaya aad post soo socda. Thanks